Pfupi.io: ​​Chichena Chiraira URL Ipfupi | Martech Zone
Pfupi.io: ​​A White Chita URL Shortener
China, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Douglas Karr
Kwenguva yakati rebei, ndanga ndasaina nebasa rekufupisa ma URL angu, asi mutengo weiyo sisitimu waidhura. Kushandisa yangu yega subdomain inodhura zvakanyanya mumhando yavo yemitengo. Muchokwadi, ini ndanga ndichibhadhara yakawanda yavo URL yekupfupisa account kupfuura yandaive kubhadhariswa kwese kushambadzira mapuratifomu.
Ndingadai ndakashandisa yemahara vhezheni uko yangu domain haina kuenzaniswa, asi II ndaida kuti vanhu vavimbe nekuziva iyo URL yandaive ndichigovera… mune ino kesi go.martech.zone. Kuisa imwe generic URL mureza mutsvuku kune vakawanda vanoziva nezvekuchengetedza.
Izvo chete zvakatora maminetsi mashoma kuwana akawanda emidziyo zvishandiso pamhepo, uye Ipfupi.io kumira pakarepo. Ini ndaigona kuchena kunyora mupfupi neyangu subdomain - kunyangwe pazasi mahara account! Kwete izvozvo chete, ivo vane nzira dzekufambisa kubva kupfupisa kwekare kana iwe usingakwanise kuendesa kunze kwenyika uye kuendesa data rako… zvakare pasina muripo.
NePfupi.io, unogona kuitora zvine simba kugadzira iyo slug kana iwe unogona kungoishandisa iyo nhamba uye auto-yekuwedzera iwe. Uye, iwe unogona kupinda mukati uye kugadzirisa iyo slug iwe yaunoda kana iwe uchida, futi.
Chinhu chakakosha pamwe neGoogle Analytics Campaign yekutevera. Nzira huru yekushandisa kupfupisa URL ndeyekudzora hurefu hwese hwehurefu hweURL kwawakaisawo tambo yako yemubvunzo yeUTM. NePfupi.io, ichi chikamu chese sarudzo pane yako yakapfupiswa URL ine yakanaka yakachena interface.
Chekupedzisira, Pfupi.io zvakare inopa a WordPress Plugin kuti zvipfupise zvinongedzo zvako uchishandisa API yavo. Chaizvoizvo chimiro!
Tags: bitlytsika dunhugoogle analyticsgoogle analytics mushandirapamwe wekutevera urlgoogle analytics yekutevera urlpfupi.cmpfupi.iochipfupiurl ipfupiUtmchena chitaridzi